နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား	နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား
This entry was posted on October 24, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဓမ္မအတွေး၊ဓမ္မအမေး .	→
October 25, 2011 at 2:56 am	Reply	July Myo
January 17, 2012 at 11:19 pm	Reply	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...